Immisa ayey ku kacaysaa in faras la ilaaliyo bishiiba | Fardaha Noti
Monica Sanchez | | Noticias
Ma waxaad ku fikireysaa inaad hesho faras? Kahor intaadan wax qaban, waxaa muhiim ah inaad ogaato inta ay le'egtahay kharashka si aad ugu haysato xaalad wanaagsan, maadaama habkan aad ku ogaan doonto haddii aad runtii ku bixin karto kharashkaas ama haddii liddi ku tahay ay fiican tahay inaad waxyar sugto.
Waana in daryeelkeeda sida ay mudan tahay aysan raqiis ahayn. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad ku faraxdo, dhowr ka mid ahna waxay ku yimaadaan qiime sare. Sidaas, aan aragno inta ay le’eg tahay faraska in la ilaaliyo.
Xayawaankani waa noole, sidaa darteedna wuxuu u baahan yahay taxaddar taxaddar ah si uu u helo nolol sharaf leh iyo inta ugu macquulsan. Maskaxda ku hay tan, xitaa kahor intaadan iibsan, waa inaad sameysid sanduuqyo lacag ah. Marka xigta waxaan kuu sheegeynaa inta ay le'eg tahay faraska in lagu ilaaliyo qiyaas ahaan:
2 Xannaanada xoolaha
2.3 Dhakhtarka ilkaha
2.4 Kharashaadka kale ee soo bixi kara
3 Kabo fardo ah
Waxay ku xirnaan doontaa da'da xoolaha iyo sidoo kale waxqabadkooda. Laakiin si aan fikrad kuu siiyo, waa inaad ogaataa waxyaabaha soo socda:
Mareereyaasha uurka leh iyo dadka waaweyn waxay leeyihiin quudin maalinle ah inta udhaxeysa 1,5 iyo 2% miisaankooda.
Neefsashada maareynta iyo foolaadka, inta u dhexeysa 2 ilaa 2,5% miisaankooda.
Ponies-ka ayaa sameeya miisaankooda ilaa 1,5%.
Tusaale ahaan, Haddii faraska culeyskiisu yahay 600kg oo uu qabto shaqo aad u kacsan, waa inuu cunaa 9kg oo quudin ah iyo 6kg oo ah calafka maalin kasta.. Tani bishiiba waxay ka dhigan tahay 270kg oo quudin ah iyo 180kg oo calafka xoolaha ah.
Quudinta waxaa badanaa lagu iibiyaa jawaano 20kg ah oo qiimahoodu yahay 30 euro; iyo calafka, haddii ay tahay in la iibsado, waxaa lagu iibiyaa alpacas yar ama dhexdhexaad ah oo qiimihiisu yahay qiyaastii 9 euro.
Fardahaasi ma cunaan?
Farduhu waxay u baahan yihiin saddex tallaal: teetanada, hargab ama ifilo, iyo sinjiraha loo yaqaan 'equine rhinpneumonitis'. Mid kasta oo iyaga ka mid ah Waxay ku kacaysaa qiyaastii 35 euro waana lagugula talinayaa inaad xirato sanadkiiba hal mar.
Boogga iyo shilinta, iyo sidoo kale dulinleyda kale iyo cayayaanka ayaa saameyn ku yeelan kara fardaha. Si tan looga fogaado, waa in lagu cariiriyaa alaabooyin gaar ah, kuwaas oo lagu iibiyo 3kg xabbo oo qiimahooduna yahay 25-28 euro / sanadkii.
Waqti ka waqti ma xuma in la arko dhakhtarka xoolaha. Inta jeer ee ay tahay inaad booqato waa 1 jeer 2dii sanaba mar, waxayna ku kacdaa 65 yuuro.
Kharashaadka kale ee soo bixi kara
Haddii xayawaanku leeyahay colic, jirro ama shil, wuxuu u baahan doonaa caawimaad dhakhtar xoolaha. Haddii ay dhacdo, waa inaad keydisaa ilaa 500 euro sanad walba.
Kabo fardo ah
Dayactirka fardaha fardaha ayaa ku saabsan 50 euro 2dii biloodba mar.
Tababbarka faraska, waa inaad aadaa meel ku habboon baahiyahan, sidaas darteed, waa inaad lacag badan ku bixisaa. In kasta oo qiimayaashu ay kala duwan yihiin iyadoo ku xiran aagga aad ku nooshahay, way ku dhow yihiin 160-300 euro bishii.
Qiimaha baloogku wuu ka sarrayn doonaa ama ka hooseyn doonaa iyadoo ku xiran cabbirka iyo tayada. Si aad u ogaato wax badan ama ka yar waxa kugu kici kara, maqsin galvanized ah oo dhererkiisu yahay 3,50 mitir dhererkiisuna yahay 2,30, oo ku habboon fardaha yar yar iyo feerka, waxay ku kacaysaa qiyaastii 450 euro.
Si looga fogaado dhibaatooyinka, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad caymis u gasho fardaha, kuwaas oo ku kacaya wax yar 80 euro sanadkii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Noticias » Immisa ayey ku kacaysaa in faras la ilaaliyo bishiiba
Angela Graña dijo
Waad salaaman tihiin, qoraaga maqaalkani hada uma sii shaqeynayo. Waxaan haystaa qayl, sida aad ku arki karto maqaaladii ugu dambeeyay ee la daabacay (kuwaas oo ka tayo wanaagsan maxaa yeelay kahor ma jirin qoraayo takhasus leh) waxaadna heli kartaa qayl saafiya oo saafi ah oo ah 2.000 euro iyada oo aan dhibaato jirin. Haddii faras kasta uu qiimo leeyahay xitaa wax aad uga yar. Laakiin haddii aad rabto inaad ku diyaariso edbin gaar ah, way ka qaalisan tahay.
Jawaab Ángela Graña
La soco maxaa yeelay maqaal ku saabsan ayaa dhowaan la daabici doonaa.
Wanaagsan waxaan ku iibsanayaa faras waxyar oo horey looga hadlay ama in kabadan ama kayar waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado bil inta faras inta badan cuno iyo kharash gareeyo, tan iyo aasaaskii waxaan kuhelaa bilaash mahadsanid saaxiib wanaagsan saxiibkay salaan.
Aniga waa mid qurux badan, dabeecad wanaagsan oo aan arkay, poe wanaagsan, talaabo wanaagsan iwm mana uusan soo bixin gacaliso aad u badan hadaad raadiso waxaad kaheli kartaa tuwaal, salaam waxaan sugayaa jawaabta
Jawaab faras 29
Haye, ha aaminin waxa ay ka yiraahdaan qiimaha faras lagu hayo. Waxay kuxirantahay hadaad kuheli karto beertaada ama guri hoygaaga ah. Hadday ahaan lahayd kiiska dambe, waxaa jira amaahda guryaha oo fara badan oo bil kasta laga qaado 200 oo euro. Haddii ay run tahay, in dhakhtarka xoolaha haddii ay lagama maarmaan ahayd in la waco, waxaad si gooni ah u siin doontaa isaga. Laakiin waa ilaahay mahadii, baahidaasi badanaa ma soo baxdo. Faras shaqeeya maalin kasta wuxuu cuni karaa qiyaastii 3 kg oo quudin ah maalintii, oo ay ku jiraan calaf kasta oo aad siin karto. Ku saabsan kg. Waxaan u maleynayaa inay noqon karto ilaa 50 cts. Way ka culus tahay qaali.
800 bishii cuntada? XAGEE KU TAGTAA !!!!! laakiin …… XAGEE KU TAGTAA !!!!!!!!! Waxaad ii sheegi doontaa sida xarumaha fardooleyda oo kaa qaadaya 300 euro bishii wax walba….
800 euro bishii cuntada? Hahahaha, xaggee ka heshay taas? Iyada oo 120 euro / bishii farasku si fiican u cuno
Waxaan faras ku raacayaa da 'aad u yar faraskuna wax badan ma cuno, waa inaad siisaa seddex cunno oo isku dheellitiran maalintii, sidoo kale haddii aad siiso cunto aad u badan waxay yeelan karaan calool xanuun waxaana jira fardo aan u baahnayn Kabo fardo ah maxaa yeelay waa qoob adag yihiin. Si kastaba ha noqotee, faras ilaalinta ma aha mid aad qaali u ah, laakiin waxay u baahan tahay ballanqaad iyo masuuliyad.
Ku jawaab aurora
Tusaale ahaan, waxaan haystaa digaag faras ku boodaya hadana waxaan ku hayaa beer gaar loo leeyahay oo qiimahiisu yahay € 250 bishii oo ay kujirto cuno halkaas ku jirta, ka dibna faruuraha 3-4 bilood kasta waa € 60 iyo Vetedinario ee talaalka Iyagu waa € 30 sanadkii, caymiska waxaa iska leh faraska maadaama oo uu yahay waddo yar oo aan kaliya ku raaco halkaas.
SALVADOR MACIAS dijo
GALAB GOOB, WAAN AKHRISAY QODOBKA AAN RAADINAYO FAROOD OO AAN RABO IN AAN HELO TIXGELINTA CUNTO-KABAYNTA IYO CAYMISKA XOOLAHU II QAADAN KARO, WAXAYNA LEEDAHAY saameyn aan ku bixi karo THAT 800 bishii Cunto KELIYA KHARASHKA, QOF WAA I I SOO ​​II SOO ​​II SII SIIXI KARAA INTAN SII BADAN AMA KA YAR?
Jawaab SALVADOR MACIAS